Kooxda Jwxo-shiil: Wadada Kaliya ee Furan Waa in ay ku Dhamaato Dhaxgalka Dadweynaha – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil: Wadada Kaliya ee Furan Waa in ay ku Dhamaato Dhaxgalka Dadweynaha
Jul 14, 2011 Kooxda Jwxo-shiil: Wadada Kaliya ee Furan Waa in ay ku Dhamaato Dhaxgalka Dadweynaha
Kooxda Jwxo-shiil, oo ka sii dabar go,aysa Waqooyiga Maraykanka iyo xubno yar oo aan aduun la socon oo eegga uun ku biiray xili ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen.
Xubnaha ugu muhiimsan kooxda Jwxo-shiil, waxay ogg yihiin dambiyada ay ka galeen ummada Somalida Ogadeeniyaa, waxaa kale oo ay ogg yihiin in aan marna laga cafiyeynin dambiyada ay galeen oo isugu jira mid guud iyo kuwa gaar ah. Waxaa kale oo ay la socdaan in hawshii ay ku jireen ay soo dhamaanayso.
Hadaba, iyaga oo arimahaas oo dhan maskaxda ku hay waxay isku raaceen saddex qodob; in ayna wax walba oo dhaca qaadan heshiis, in ayna samaynin wax isbadal ah iyo in ay soo duufsadaan cid kasta oo ay maskaxda ka xadi karaan.
1. Haday Ethiopia nabad la galaan kolna waxaan daynaynin dadweynaha Somalida Ogadeeniya, sidaas daraadeed waxay isku raaceen in wax walba oo dhaca ayna heshiis nabadeed yeelin
2. In ayna Isbadal samayn, sababtuna waa hadii ay isbadal sameeyaan waxaa suurto gal ah in wali waxaa laga waydiin dambiyadii ay galeen.
3. Waxaa ka go,an in ay helaan dad la wadaaga dunuubta ay galayaan [xaalkii Iblays].
Waxaa waxaa saddexdaa arimood ee ay go,aansadeen lid ku ah; in Ethiopia ayna marna la heshiinaynin kooxdan iyo in ayna jirin cid ka tagta mooyee cidi ku biirta.
Jawaabta go,aamadan lidka isku ah ayaa ah in ay kooxdu si tartiibtartiib ah ugu dhex milanto dadweynaha, taas oo ah go,aanka kooxda.
Hadaba, in ay soo af jaranto kooxdani waxay qaadan muddo , inta ay soo xidhmayaan waxay dhibaato badan gaadhaysaa taageerayaasha kooxda ee jooga dalka gudihiisa iyo dariska, kuwaas oo aan si fudud u dhex gali karin dadweynaha.
Waxaa laga yaabaa in ayna waxyeelo soo gaadhin kooxda inteedad dibada joogta, waa hadii ay ka nabad galaan cabsi galin caalami ah.
In arintoodu ay gabaabsi tahay waxaa daliil u ah mudo labo sano ah waxaa kooxda ku soo biiray labo xubnood oo midna Maraykanka joogo midna dalka Holland joogo.
Kooxda Jwxo-shiil dhinaceeda waxaa ka tagay 8 xubnood oo golaheeda dhexe ah, taageerayaashu iyagu xisaab ma leh.
Hadii ay kooxdu ka gudubto sanad, misna ayna dawlada guud ee Ethiopia iyo dawlada degaanka Somalidu samayn talaabooyin horumarineed oo dhab ah, waxaa suurto gal ah in ay abuuranto koox kale oo lid ku ah Ethiopia iyo kooxdanba.
UDSE: Ilays Dhab ah oo Awood Badanbaa, Dhamaan ka Istaagay Aduunyada